Khilaafka Dowladda iyo Ahlu-sunna oo Dagaal isku badalay - Awdinle Online
Khilaafka Dowladda iyo Ahlu-sunna oo Dagaal isku badalay
November 02, 2019 (AO) – Degmooyinka Guriceel iyo Matabaan ee Goboladda Galgaduud iyo Hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa Xiisad u dhexaysa Ciidanka Dowlada Faderaalka Soomaaliya gaarahaan Kuwa qaybta 21 aad iyo Xoogag taabacsan Hoggaanka Ahlusunna ee bartamaha Soomaaliya.
Khilaafkaan oo soo ifbaxay Dhawaan ayaa maanta oo Sabti ah isku badalay Gacan ka hadal,waxaana dagaalo goos goos ah Maanta ka kala dheceen degmooyinka Guriceel iyo Matabaan ee bartamaha Soomaaliya.
Dagaalka Maanta ka dhacay Guriceel ayaa waxaa ku dhintay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Amaanka Matabaan, kaas oo Magaciisa lagu sheegey Bashiir Cali Badal,waxa uuna ka mid ahaa Saraakiisha Ciidanka degmada ee Ahlusunna.
Warar lagu kalsoon yahay oo uu helay Mustaqbal Radio ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ka tirsan ee Matabaan gaarey ay galbinayeen Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdi Maxamed Sabriye waxaana halkaasi isku rasaaseeyey Ciidanka Ahlusunna iyo Ciidamo uu watay Wasiirka arimaha Gudaha Soomaaliya.
Xuseen Salaad Ibraahim, gudoomiyaha degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan, ayaa ku eedeeyay askarta Wasiirka in ay bilaabeen xaabadda taasna ay ka dhalatay dhismasha mid ka mid askarta Booliska Matabaan.
“Waa waxba kama jiraan,” ayuu u sheegay VOA-da markii la waydiiyey hadii ay is hortaageen in ay gudaha magaaladda galaan kolanyadda Wasiir Sabriye. “Annaga dhankeena hal askari ayaa naga geeriyooday,” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Dhinaca kale, tacshiirad u dhaxeysa ciidanka dowladda iyo xubno ka tirsan Ahlu Sunna ayaa laga soo tabiyey isla maanta magaaladda Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Gudoomiyaha ayaa ku eeday wasiirka in uu duulaan ku soo qaaday Matabaan,waxa uuna sheegay in ciidanka Ahlusunna ay dhinac uga suganyihiin Degmadaan ku taal Xaduudka kala qaybiyaha Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Previous articleBusiness council calls for boosting Turkish-Somali trade ties
Next articleSOMALIA’S INTERIOR MINISTER ESCAPES MURDER ATTEMPT